Home » Lahatsoratra farany farany » tompon'andraikitra » Mandehandeha mihoatra ny tanànan'ny New York City, Manhattan Zip Code
Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Fiarovana amin'ny dia
Mety hitsiriritra ny arimoara feno Prada sy LV aho, fa ny tadiaviko haingana dia ny fahafahanao mandeha am-pilaminana ivelan'ny kaody Zip.
Rehefa mihaino ny MSNBC, FOX ary CNN aho, dia ampandrenesina ny amin'ireo fiovaovan'ny COVID, ny filàna tsimoramora amin'ny tifitra booster, ny fitomboan'ny isan'ny olona marary ary ny fahafatesana izay miery any ankoatry ny faravodilanitra.
Nandritra ny roa taona dia nalaina an-keriny tao amin'ny efitranoko aho, saro-kenatra niditra an-tanàna nisaron-tava tanteraka, tsy nanakaiky ny fifandraisan'ny olon-dehibe sy ny ankizy ary ireo nanimba tena.
Mandeha am-pitandremana ny alika sy ny biby hafa aho, mametra ny fifandraisako manokana amin'ny mpitsabo ara-batana ahy, mpanazatra fanatanjahan-tena, mpitambola fivarotana lehibe, ary ilay mpandray olona amin'ny latabatra ao amin'ny gym.
TSY FOMBA ahavelomana ny COVID velona!
Tondroy ny rantsan-tànana | Iza no omena tsiny?
Betsaka ny manome tsiny - manomboka amin'ny lohan'ny World Health Organization (OMS) izay saro-kenatra loatra ka tsy nahafantatra ny areti-mandringana raha vao nahita izany.
Ny sekretera jeneralin'ny OMS dia arahana akaiky rehefa omena tsiny ny tompon'andraikitra ambony izay mahazo vola an-tapitrisany dolara ao anatin'ny indostrian'ny sambo fitsangantsanganana izay voafatotra loatra amin'ny volany ka miantso vonjy maika - na dia efa nampahafantarin'ireo mpitsabo efa za-draharaha azy ireo aza izany. .
Manaraka ireo izay homena tsiny ny talen'ny seranam-piaramanidina izay miahiahy bebe kokoa amin'ny fanatontosana ny laharana noho ny famatsiam-bola hanatsarana ny rafitra HVAC, hanolo ny fanaka sy ny fitaovana amin'ny fitaovana antimicrobial na hitondra robot sy teknolojia vaovao hampitomboana ny asa tsy ifandraisana.
Ny tompon'andraikitra amin'ny seranam-piaramanidina ihany koa no manome tsiny. Matetika izy ireo koa dia aleony manafina ny isa COVID ao ambadiky ny brochure mamirapiratra sy ny vidéo lafo vidy fa tsy ny fanavaozana ny rafitra HVAC, ny fanoloana ny lamba sy ny jiro amin'ny vokatra antimicrobial, na manampy robot amin'ny lisitry ny mpiasa.
Mihazakazaka miaraka amin'ireo mpitantana ireo ny mpitondra fizahan-tany izay miaina ao anaty "sambo mpisitrika mavo" satria naïve loatra na myopika loatra izy ireo hahafantatra ny aretina rehefa niampita ny sisintaniny, ny vavahady, ny vavahady ary ny tara, nanafika ny fireneny ary nanafika ny namana, fianakaviana ary mpitsidika. Latsaka ao amin'ity honahona ity ireo mpizahatany izay manajamba ny fitiavan-tena sy ny fahasarotam-po ka mahatsapa fa indraindray ny faniriana sy ny faniriana dia mihemotra tsara ho an'ny tombontsoan'ny hafa ary mety tsy izao no fotoana mety indrindra hanatevin-daharana fihetsiketsehana môtô na hiravoravoana amin'ny ekipa fanatanjahan-tena miaraka amin'ireo mpandeha mitovy hevitra an-jatony sy an'arivony.
Mety hitranga ve izany?
Isaky ny iray minitra isan'andro, ireo manam-pahaizana amin'ny fahitalavitra dia manana fahaizany miatrika fakan-tsary ary miteny amin'ny mpijery an-tapitrisany fa na eo aza ny fampitandremana rehetra dia tonga ny fotoana hialana amin'ny fiarovana azo antoka an'ny manodidina anay ary handeha any amin'ny toerana misy ny aretina COVID-19 mihombo. . Tian'ireo mpivarotra fisakafoanana hitsidika ny trano fisakafoanan'izy ireo izahay, na inona na inona satan'ny viriosy. Mamporisika antsika ny hafatra mba haka carte de crédit, ankizy, fianakaviana ary namana ary handany ora vitsivitsy hisakafoanana sy hisotro eny amin'ny habakabaka izay mety tsy manana rafitra HVAC manara-penitra na mpiasa misavoana sy misaron-tava.
Tmpitarika ny indostrian'ny herismap mbola tsy nanaiky fa ny hetsika fizahan-tany, indrindra ny fitsangatsanganana, dia fiara hampielezana ny aretina; ny indostria dia tokony ho lohalaharana amin'ny fisorohana aretina - famolavolana sy fampiharana fampiharana, rafitra ary fomba fanao amin'ny fahasalamana sy fiarovana. Ireo tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta tompon'andraikitra amin'ny fizahan-tany dia tokony hamantatra ampahibemaso ny andraikiny sy ny andraikiny, satria izy ireo no fifandraisana eo amin'ny areti-mifindra sy ny mpifidy azy, mametraka azy ireo amin'ny toerana hamerana na mandrara ny fivezivezena mihitsy aza ho fepetra hitantanana ireo loza ateraky ny fifindran'ny virus.
COVID-19 dia namorona tontolon'ny fizahan-tany tsy azo antoka izay tsy hiparitaka. Na dia tsy fandrahonana intsony aza ny COVID-19, ny viriosy vaovao sy ny aretina hafa dia hahita fomba hidirana amin'ny tontolontsika, ary hiatrika tsy fahatokisana indray ny indostria (izany hoe ny faharetan'ireo krizy, ny politikam-panohanana avy amin'ny governemanta, ny mpizahatany fitondran-tena).
Malahelo ny fandefasan-kafatra ataon'ny governemanta
Ny fikarohana dia manondro fa ny hafatra COVID-19 vatsian'ny governemanta dia tsy mandeha (manahirana kokoa noho ny fampahalalana). Misavoritaka ireo hafatra satria tsy tonga any amin'ny tsena kendrena voalohany ary tsy manome fampahalalana tsy miova izay ilaina sy azo ampiharina.
Ny mpitarika hotely, fitsangantsanganana ary fizahantany koa dia sahirana mamorona horonantsary maro loko miaraka amin'ireo mpiasan'ny kaontenera mpandihy ary mpijery amin'ny skateboards; na izany aza, tsy tonga any amin'ny tsena kendrena ireo hafatra ireo. Fa maninona Satria amin'ny sehatry ny fizahan-tany dia tsy miresaka amin'ireo mpanapa-kevitra voalohany momba ny dia, vehivavy izy ireo ary tsy miaiky ny tahotra fitsangatsanganana mandritra ny COVID-19.
New York dia mitaky mari-pankasitrahana vaksinin'ny COVID-19s saika ny zava-drehetra mifandraika amin'ny dia.
Raha ny olana ara-piarovana sy filaminana no resahina, ny vehivavy dia mitaky be kokoa noho ny lehilahy manoloana ny fepetra fiarovana ilain'izy ireo raha te-hahatsapa ho voaro izy ireo rehefa mandeha.
Ny paikady tadiavin'izy ireo dia misy ny fahadiovana, ny fampiasana otrikaretina, ny fisian'ny fizahana ara-pahasalamana sy fampahalalana ataon'ireo mpitsabo efa voamarina (izany hoe ny dokotera, ny mpitsabo mpanampy, ny mpitsabo mpanampy), ny fanamarinana ofisialy natolotry ny loharanom-baovao azo antoka (izany hoe hopitaly, sekoly fitsaboana) , ary ny fanapahan-kevitra momba ny fahasalamana mifototra amin'ny angona siantifika fa tsy amin'ny famporisihana ara-bola.
Manantena ny vehivavy fa hanome trano fanadiovana lalina sy hosasan-tànana be ny mpiasa amin'ny trano fandraisam-bahiny. Ny vahiny sy ny mpiasa dia tokony hisaron-doha, ny toerana malalaka ho an'ny daholobe dia tokony diovina sy diovina amin'ny fandaharam-potoana navoaka ary ampiarahina amin'ny toerana iraisana, teboka ifandraisana (izany hoe: arofanina, latabatra, tahony, fantsakana).
Ny efitranon'ny lalao dia tokony ho eny amin'ny habakabaka mba hamindra otrikaina miaraka amin'ny ascenseur sy escalator. Ny fampitaovana ao amin'ny efitrano toy ny lavitra any amin'ny fahitalavitra, ny jiro mandeha ary ny termostat dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny protokolota. Ny fandoavam-bola amin'ny serivisy rehetra dia tokony ho fitaovana elektronika ary alikaola misy alikaola misy isaky ny gorodona amin'ny fidirana amin'ny faritra fandraisam-bahiny sy sakafo / zava-pisotro. Ny Buffet dia tokony hesorina na nohavaozina ho mpiasa.
Ny vehivavy te-hivezivezy ary manam-bola lany. Ny traikefa amin'ny dia dia manome fialana amin'ny fanazaran-tena isan'andro ary manolotra fotoana mety amin'ny fifamatorana ara-tsosialy sy ny fahafinaretana hedonic. Zava-dehibe ny manamarika fa ny vehivavy dia nampihena ny fotoana fivezivezeny ary ny fikarohana (Brooks sy Saad, 2020) dia nahatsikaritra fa 60% ny vehivavy amerikana monina no matahotra sy manahy sao voan'ny COVID-19. Ny fandinihana iray hafa dia nahatsikaritra fa ny tahotra, ny rikoriko ary ny fahatezerana indraindray dia nanjary valiny ara-pihetseham-po mifandraika amin'ny fiarovana ny fiarovana azy ireo ara-batana mandritra ny COVID-19. Ny mpitsangatsangana vehivavy dia mahatsapa loza ara-pahasalamana amin'ny viriosy, manosika azy ireo hamoy fo izay rehefa mandeha ny fotoana dia lasa matahotra. Raha vantany vao lasa ny fihetseham-po manjakazaka ny tahotra ny risika fahasalamana azo tsapain-tanana dia mazàna izy ireo misoroka ny fihetsika sasany toy ny dia.
Esory ireo silo
Mba hampihenana ny tahotry ny dia, ny indostria dia tsy maintsy mamarana ny fomba fi-silo azy izay mampizara ny indostria ary mamoaka hafatra mifangaro. Amin'ny fiaraha-miasa dia afaka manome fifandraisana eo amin'ny sehatra rehetra ny indostria mahatonga ny traikefa amin'ny dia tsy hampatahotra. Ny fitsangatsanganana mankany / avy amina toerana itodiana dia tsy maintsy milamina, manomboka amin'ny fitaterana an-tanety mankany amin'ny sidina anatiny sy iraisam-pirenena, trano fonenana ary fisakafoanana miaraka amin'ireo kaonty marokaretina hita mazava tsara mandritra ny dia manontolo.
Ny sehatra miankina amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina manana andraikitra amin'ny fizahantany dia tokony hizara ampahibemaso ny fandinihany sy ny tolo-kevitr'izy ireo amin'ireo fivoriana tsy misy fetra fa tsy notendren'ny mpanolo-tsaina ny fifandraisana amin'ny daholobe. Ny haino aman-jery sy ny mpanjifa dia tokony hahafantatra sy hahatakatra ny fizotran'ny eritreritra momba ny fanapahan-kevitra raisina amin'ny dia (na tsia); manokatra sisintany (na tsia); hametrahana kaody fiarovana, fidiovana ary fiarovana (na tsia); ary raha misy fiovana, ny anton'ny fahasamihafana.
Ny mpitarika sy ny mpanjifa ho an'ny daholobe sy ny tsy miankina dia tokony handray anjara amin'ny famolavolana, fampiharana ary fampiasana vokatra vaovao momba ny fahasalamana, sy rafitra ary fomba fiasa miaraka amin'ireo faritra mitambatra mitsivalana sy mitsivalana. Ny fahaiza-mitarika dia tokony ho avy amin'ny indostria, miorina amin'ny fahaiza-manao fa tsy amin'ny fifandraisan'ny governemanta na ny fitaomana manokana, na ny harena.
Mba hampihenana ny tahotra sy hampihenana ireo risika mifandraika amin'ny fitsangatsanganana COVID, ny indostria dia tsy maintsy:
1. Resaho ny fotoana rehetra ahafantarana amin'ny fihanaky ny viriosy (fizahana ara-pahasalamana ny vahiny sy ny mpiasa isan'andro).
2. Mitaky porofon'ny fanaovana vaksiny ho an'ny vahiny alohan'ny hanekena ny famandrihana sy fisoratana anarana.
3. Ampiharo ny elanelana ara-tsosialy manerana ny toerana itodiana sy trano hipetrahana.
4. Mametraha sakana ara-batana eo anelanelan'ny mpandeha sy ny vahiny ary ny mpiasa.
5. mandrara ny fihoaram-pefy eny amin'ny seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina, manintona, hetsika, trano fisakafoanana ary hotely.
Ny ara-dalàna vaovao dia fihetsika fifandanjana eo amin'ny fihazonana traikefa mahafa-po ho an'ny mpizahatany sy ny fanarahana ny fepetra hentitra noraisin'ny manampahefana momba ny fiarovana sy ny fidiovana.
Tapa-kevitra ny saiko
Raha toa ka tsy naharesy lahatra ny fampitandremana rehetra sy ny hoe "ahoana raha toa…… hanemorana ny dia, dia ao ireo fanontaniana izay mila valiny alohan'ny hanomezana carte de crédit amin'ny agents agents:
1. Inona ny tahan'ny COVID-19 miparitaka any amin'ilay toerana aleha? Miakatra sa midina ny isan'ny aretina sy / na fahafatesana?
2. Inona ny tahan'ny COVID-19 miparitaka ao amin'ny fiarahamoninao manokana?
3. Azonao atao ve ny manalavitra ny tenanao (amin'ny tongotra 6 farafahakeliny) amin'ireo olona miaraka aminao?
4. Tandindomin-doza be ve ny namanao / fianakavianao amin'ny COVID-19?
5. Miaina olona COVID-19 mety hampidi-doza ve ianao?
6. Moa ve ny fanjakana na fanjakana eo an-toerana onenananao sy / na any amin'izay alehanao dia mitaky anao hipetraka quarantine mandritra ny 14 andro aorian'ny dia ataonao?
7. Raha marary amin'ny COVID-19 ianao, tsy maintsy tsy hahita asa na adidy hafa ve ianao?
8. Raha marary ianao mandritra ny dianao, inona ny protokolata takian'ny governemanta eo an-toerana ary manao ahoana ny satan'ny fitsaboana (hopitaly, dokotera, fanafody) any amin'izay itiavanao azy? Hiantoka izany ve ny fiantoham-piainanao?
Raha fiara ny maodam-pitetezanao, ny fanomanana mialoha ny dia dia mila fanadiovana tanteraka sy famonoana otrikaretina ny fiara. Ny faritra rehetra dia tokony hofafana (varavarankely, fehikibo ary fehikibo, familiana, vavahady, fifehezana, gorodona sns.). Ankoatry ny tsakitsaky sy rano, manana am-paosy famonoana bakteria sy fanadiovan-tanana. Raha vantany vao ao anaty fiara ny olona rehetra, tazomy ny varavarankely raha azo atao. Raha tsy azo atao izany dia ampiasao ny A / C ary apetraho amin'ny fomba tsy miverina mivezivezy ny rivotra.
Fepetra ny isan'ny olona mandeha amin'ny fiara iray ihany ary manaova fandaharana mba hisaron-tava ny olona rehetra (izay misy azy fa tsy amin'ny lambam-bava). Mijanona amin'ny lasantsy na tsakitsaky? Manendre mpihazakazaka gasikara sy / na tsakitsaky - olona tsy atahorana mafy. Ireo "mpihazakazaka" dia tokony hosaron-tava tanteraka ary hanana tanana madio / voadio alohan'ny hidirany ao anaty fiara.
21 Janoary 2021, fitsipika napetraky ny governemanta federaly no namaritra fa «fanitsakitsahana ny lalàna federaly ny TSY fanaovana sarontava amin'ny fitateram-bahoaka (Torolàlana CDC). Ny sidina ara-barotra rehetra dia tokony hitaky ny saron-tava ny mpandeha (ao anatin'izany ny ankizy 2 taona no ho miakatra. "
Tsy matoky na iza na iza! Tsy fantatrao izay mipetraka eo akaikinao, eo alohanao, ary andalana 3 ao aorianao - ka MASK UP! Ho fanampin'izany, tazomy hadio ny tanana ary aza araraoty ny endrika amboninao, ny tavanao ary ny faritra hafa amin'ny vatanao.
Miaraka amin'ny tambajotra matihanina amin'ny dokotera sy ny mpitsabo manolotra hetsika ivelan'ny trano, nitombo ny fahatongavan'ireo valan-javaboary. Raha manapa-kevitra ny hisoratra anarana amin'ny fitsaboana ala ianao, fantaro ireo zaridainam-panjakana akaikin'ny trano (heverina ho tsy dia atahorana loatra) ary mifandraisa amin'ny fitantanana ny valan-javaboary hamaritana raha mihaona amin'ireo protokolon'ny COVID miaraka amin'ireo fotodrafitrasa fidiovana malalaka sy madio (toy ny rano mandeha, taratasy fidiovana savony, ary lamba famaohana tanana azo atsipy). Misokatra ve ny kianja filalaovana ary mihaona amin'ny torolàlana CDC momba ny halavirana sy ny fidiovana? Raha manolotra dobo filomanosana, fandroana mafana, na faritra filalaovana amin'ny rano hafa ilay valan-javaboary, inona avy ireo rafitra ampiasaina hitandroana ny fahafahan'ny vahiny sy ny COVID-19 maimaimpoana?
Raha marary ianao sy / na ny sakaizanao, dia efa nanaporofo tsara na voan'ny COVID-19 farany teo - AZA MIVARITRA, ary na manao ahoana na manao ahoana ny fahasalamanao, aza dia matetika ny valan-javaboary be olona.
Hotely / BnBs
Alohan'ny hizarana ny fampahalalana momba ny carte de crédit hialana efitrano iray, manadihady momba ny programa fanadiovana ny trano fandraisam-bahiny na fananana (vokatra ampiasaina, fahadiovan'ny fanadiovana, raha misaron-tava ny mpiasa ary hosokafana, hisy toerana foana 24 ora aorian'ny fitsidihan'ny vahiny iray, ary ianao no mibodo ny toerana?).
Angamba tsara kokoa ny manadio ny toeranao manokana (hahazoana antoka fotsiny). Mitondrà fitaovanao fanadiovana tianao indrindra ary diovy ny faritra alohan'ny hipetrahanao sy ny namanao / ny fianakavianao.
Raha mpampidi-doza ianao ary mikasa ny hanao dia lavitra nefa tsy mahazo protokolola fanaovana vaksiny dia manaova fitsirihana virtoaly 1-3 andro alohan'ny hiainganao. Mitafy sarontava amin'ny fitateram-bahoaka sy amin'ny habakabaka rehetra (ao anatin'izany ny seranam-piaramanidina sy ny gara). Halaviro ny valalabemandry ary mijanona farafahakeliny 6 metatra miala eo amin'ny olon-drehetra. Sasao sy diovy matetika ny tananao amin'ny mpanadio tanana izay alikaola 60 isan-jato farafahakeliny. Tokony haverina 3-5 andro aorian'ny fitsangatsanganana ny fitsapana ary ho vonona hijanona ao an-trano sy hanana quarantine farafahakeliny 7 andro aorian'ny fitsangatsanganana… na dia mizaha toetra ratsy aza ianao. Raha mizaha toetra tsara ianao dia mitokana mba hiarovana ny hafa. Tsy vonona ny hosedraina indray? Mijanona irery ao an-trano mandritra ny 10 andro aorian'ny fiverenanao amin'ny dia.
Ho an'ny fampahalalana momba ny dia nohavaozina, loharano tsara iray: https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/COVID-19-Country-Specific-Information.html
© Dr. Elinor Garely. Ity lahatsoratra misahana ny zon'ny mpamorona ity, anisan'izany ireo sary tena izy, dia mety tsy azo averina adika raha tsy mahazo alalana voasoratra avy amin'ny mpanoratra.
23 Aogositra 2021 amin'ny 10:52
Raha narahina ireo fitsipika sy fangatahana ireo dia mety ho tsara kokoa izao tontolo izao.